ချစ်ကြည်အေး: ရှန့်ဟိုင်း မင်္ဂလာပွဲလေးတစ်ခုအကြောင်း
ဟန်ကြည် Mon Jul 11, 01:18:00 AM GMT+8
ဆောင်ချင်သလိုသာ ဆောင်ကြပါစေတော့...မုန့်ကောင်းကောင်းကြွေးရင် ကျေးဇူးတင်ပြီးသား...
Shinlay Mon Jul 11, 01:22:00 AM GMT+8
စားစရာတွေကစုံနေတာပဲ။ ဓါတ်ပုံတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Mon Jul 11, 03:09:00 AM GMT+8
ဟင်းပွဲတွေကြည့်ပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ ဝပါ့မလားတွေးနေမိတာ
ဒီလိုပွဲမျိုး များများသွားချင်တယ် ဟိဟိ စားချင်စဖွယ်လေးတွေမို့လို့လေ...
Anonymous Mon Jul 11, 04:45:00 AM GMT+8
Please upload the pictures you have shot that morning too, Ma Ma CKA.
ညီလင်းသစ် Mon Jul 11, 08:50:00 AM GMT+8
မချစ်ကြည်အေးက ချယ်လို + စန္ဒရားအတွဲနဲ့ တွေ့လာခဲ့တာကိုး...၊ ဒီအတွဲရဲ့ တင်ဆက်မှုကို နားထောင်ပြီး ဒီလိုဟင်းတွေ လွေးလိုက်ရရင်တော့...။း)
An Asian Tour Operator Mon Jul 11, 11:39:00 AM GMT+8
အဲလို အီလီးဂန့်ဒိုင်းနင်း အဒ်မိုစဖြား နဲ့ ဂွာမက်အောသ်သန်းတစ် ကွီဇင်း နဲ့ ကလပ်ဇစ် ရှုန်ဟိုင်း မြူးဇစ် နဲ့ နောက် နှစ်ပတ်လည် မှာ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟ၊ ချစ်မောင်ညီမတွေ ကို ဧည့်ခံချင်စိတ် ပေါက်မသွား ပေဘူးလား အစ်မချစ်။
Anonymous Mon Jul 11, 12:36:00 PM GMT+8
Cameron Mon Jul 11, 12:51:00 PM GMT+8
မဒမ်ကိုး Mon Jul 11, 01:15:00 PM GMT+8
မအိမ်သူ Mon Jul 11, 02:21:00 PM GMT+8
အမတင်လိုက်ရင် မင်္ဂလာပြန်ဆောင်ချင်စိတ် ပေါက်ပေါက်သွားတယ်.. အဲဒီလို တစ်ယောက်တစ်ပွဲစီ ကျွေးတာမိုက်တယ်။ အလယ်တည်ပွဲကြီးနဲ့ဆို မအိမ်သူတို့လို အစားနှေး ယူဖို့လက်တွန့်တတ်တဲ့သူမျိုးနဲ့ဆို ငတ်တာများတယ်။
rose of sharon Mon Jul 11, 05:41:00 PM GMT+8
စားချင်လိုက်တာ... ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုကလွဲလို့ အကုန်ကြိုက်တယ်.... နောက်တခါ မချစ်သွားတဲ့နောက် ကပ်လိုက်ရမယ်.... :)
Ko Boyz Mon Jul 11, 11:12:00 PM GMT+8
တို့ တော့ ဘဲရည်ခွံကြွပ်ကြော်ပဲ ကြိုက်တယ်။
Anonymous Tue Jul 12, 05:39:00 AM GMT+8
famous very thin fashion model http://clothingtrends.eu/jeans-category21.html magic touch paris fashion 2724394
အဖြူရောင်နတ်သမီး Tue Jul 12, 05:58:00 PM GMT+8
ကိုယ့်ဝေစုနဲ့ကိုယ် ဆိုတော့ မြန်မာပြည်က မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာလို လုစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့..ဟိ
ဇွန်မိုးစက် Tue Jul 12, 11:22:00 PM GMT+8
မချစ် မသောက်လိုက်တဲ့ ငါးမန်းတောင်စွပ်ပြုတ် ဇွန့်အတွက် ပါဆယ်ထုတ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဂလု!
ပီ.အက်စ်. တို့အစ်မ ခုတလော စားပွဲတွေနဲ့ချည်း တိုးနေတယ်နော်။ ;)
blackroze Wed Jul 13, 03:45:00 PM GMT+8